सरसफाईको पर्वको रुपमा चिनिएको दिपावलीको तैयारी सुरु
रिंकु मिश्र (गायत्री)
सरसफाईको पर्वको रुपमा चिनिएको दिपावलीको तैयारी सुरु भएको छ । जनकपुरधाममा अचेल टोल तथा पसलहरुको सरसफसफाई तथा रंगरोगन भइरहेकोे छ । लगभग ७५ हजार वासिन्दा रहेको जनकपुरधाममा प्राय सबैले धनकी देवी लक्ष्मीलाई खुशी पार्न सरफसफाई सुरु गरीसकेका छन् । दिपावली अर्थात् तिहारको समय नजिकिदैं गएकोले आफ्नो पसलको सरफसफाई तथा रंगरोगन गर्न लागेका कपडा पसल संचालक अमित पाठकले भने ,“ कसको इक्षा हुँदैन घरमा लक्ष्मी भित्र्याउने ? त्यही भएर पसलको सरफसफाई गर्न लागेकाछौं ।”
पिडारी चोक ,रामानन्द चोक,बजरंग चोक,महावीर चोक,भानु चोक लगायत जनकपुरका विभिन्न चोक तथा गल्लीहरुमा संचालनमा रहेको नून पसल देखि सुन पसल सम्मको सरफसफाई तथा रंगरोगन काम भईरहेको छ । सरफसफाई तऽ प्रत्येक दिन हुनुपर्ने फेरी तिहारकै समयमा किन त ? भन्ने प्रश्नको जवावमा महावीर चोकका कपडा पसलसंचालक संजय ठाकुरले भने “एक त यो परम्परा हो अर्को कार्तिक महिना देखि मौसम बदली भएपछि घाम लुकाछिपी खेल्न थाल्छ त्यही भएर तिहार भन्दा आगावै हिन्दु धर्म मान्नेले घर तथा पसलहरुको सरफाई गर्छन ।”
तर यस अवसरमा हिन्दू पसल संचालकहरु मात्र होइन मुस्लिमहरुले पनि आ—आफ्नो पसल चम्काउने गरेका छन् जसको ज्वलन्त उदाहरण हो राजपा नेता तथा व्यापारी ईद मोहम्मद साफीको शिव चोकमा अवस्थित शू सेन्टर । साफी अचेल सहयोगी सहित पसल चम्काउनमा व्यस्त देखिएका छन् ।
तिहारमा घरका सामानहरु ,ढोका,झ्याल सबै सफा गर्नुपर्ने एक प्रकारको परम्परा नै रहेकाले आफूहरुले उक्त परम्पराको संरक्षण गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहने बताउँछीन जनकपुरधाम —८ की आशा देवी मिश्र । साथै उनले भनिन , “वर्षातको समय सकेको १ महिना सम्म मात्र आकाशमा राम्ररी घाम आउने हुनाले गृहिणीले मसला देखि लिएर कपडासम्म सुकाउने काम यसै महिनामा गर्छन ।
पत्रकार नेहा झा भन्छिन् अतिव्यस्तताको विच पनि आफ्नो संस्कृति बचाउन विजयादशमी सम्पन्न भए लगत्तै घर तथा वरपरको सरसफाइमा जुटेकी छु ।
दीपावली अर्थात “दीयोको पर्व“ शरद ऋतु (उत्तरी गोलार्द्ध) मा प्रत्येक वर्ष मनाइने एक प्राचीन हिंदू पर्व हो । दीपावली नेपाल भारतको सबभन्दा ठूलो तथा प्रतिभाशाली पर्वहरुमध्ये एक हो । दिपावली आध्यात्मिक रूपले अंधकार माथि प्रकाशको विजयलाई दर्शाउँछ ।
त्रेतायुगमा मर्यादापुरुषोत्तम भगवान रामले १४ वर्षको वनवास अवधि प’ार गरी,लंका नरेश रावणलाई बध गरी अयोध्या फर्केपछि अयोध्यावासीले घर—आंगन सफा गरी,विभिन्न रंगरोगन तथा सजावट गरी दिपावली मनाएका थिए सोही दिनको सम्झ्ना स्वरुप हिन्दु धर्मावलम्वीहरुले यस पर्वलाई हर्षोल्लासका साथ मनाउने परम्परा रहेको साधु—सन्तहरु बताउँछन् ।
दीपावलीको सामाजिक तथा धार्मिक दुबै दृष्टिले अत्यधिक महत्त्व छ । ‘तमसो मा ज्योतिर्गमय’ अर्थात् ‘अंध्यारो बाट ज्योति अर्थात प्रकाश तिर जाउ’ यो उपनिषदको आज्ञा हो । यो पर्व सिख, बौद्ध तथा जैन धर्मका धर्मालम्बीहरु पनि मनाउने गर्दछन् । जैन धर्मका धर्मामवलम्वीहरु यसलाई महावीर मोक्ष दिवसको रूपमा मनाउँछन् भने सिख समुदाय यस पर्वलाई बंदी छोड़ दिवसका रूपमा मनाउने गर्दछन् ।
दीपावली स्वच्छता एवम् प्रकाशको पर्व भएकाले केहि सप्ताह पूर्व देखि नै दीपावलीको तैयारि स्वरुप जनकपुरधाम लगायत देशभर तथा छिमेकी राष्ट्र भारतमा घर,आंगन,टोल तथा पसल,अफिसहरुको साफसफाई सुरु भएको छ ।
दीवाली नेपाल, भारत सहित करिब आधा दर्जन देशमा मनाईन्छ ।